Cudarka ADHD - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay torsdag 10 maj 2012 kl 09.57
Caruurta dhalata dhamaadka sannadka ayaa badana hesha cudurka Adhd-ga, kuwaaso loo qoro ama la siiyo daawada dejisa. carurtan ayaa ka duwan kuwa dhasha sannadka bilawgiisa.
Adhd ayaa ah xanuun uu ilmuhu noqdo mid aad u firfircoon oon fadhiyi karin, isla markaasna lumiya fookuska waxa markaas taagan.
Wiilasha dhasha bisha ugu dambaysa sannadka ee diisambar ayaa khatar weyn ugu jira in ay helaan calaamadaha cudurkan in lagu qiyaasay boqolkiiba 34 %, kuwaaso ka duwan caruurta dhalata qaybta hore ee sannadka, sidaasi waxay ku caday duwaan galinta dhakhtarka.
Sidoo kale waxaa sii xaqiijinaya arinkan dhanka daawada oo boqolkiiba 35 wiilaasha dhasha bisha diisambar ay helaan dawada cudurkan Adhd, halka caruurta dhalata sannadka qaybtiisa hore aanay helin dawadan.
Gabdhaha qudhooda dhasha dhamaadka sannadka ayaan wax wayn ka duwanayn wiilasha, sidaasi waxa qoray wargeyska maalin laha ah ee Dagens nyheter, oo helay tira koobkan ay sameeyay xafiiska maamulka dhexe ee arrimaha bulshada ( Socialstyrelsen).
Isbarbar dhig lagu sameeyay ilmaha dhasha saddexda cisho ee ugu dambaysa bisha sannadka u dambaysa ee diisambar ayaa khatar ugu jira in la siiyo dawada lagu daaweeyo cudurkan boqolkiiba 39%. Halka ilmaha dhasha saddexda cisho ee ugu horeeya bisha janaayo aanu helin astaanta cudurkan iyo dawda lagu daweeyo cudurkan ADHD.
Björn Kadesjö oo ah dhakhtar sare oo ka hawl gasha dhakhtarka weyn ee Sahlgrenska sjukhuset ee ku yaal magaalada Göteborg, kuna hawl gasha daawaynta cudurada maskaxda ee caruurta ayaa arinkan ku macnaysay in u ilmuhu dhasho isagoon bislaan, raacisayna in haddii ay gargaarka ay u baahanyiin ka helaan iskuulka aanay jirteen wax dhibaato ahi.